Filoha RAVALOMANANA Marc : nomen'ny SADC voninahitra manokana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Filoha RAVALOMANANA Marc : nomen'ny SADC voninahitra manokana
Nantsoina manokana niara-niasa tamin'ny SADC tany Addis-Abeba ny Filoha RAVALOMANANA nandritra ny fivoriam-ben'ny vondrona Afrikana farany teo. Nahomby tanteraka ny asan'izy ireo tamin'izany satria dia nivoaka mpandresy Nkosazana Dlamini-Zuma, ministry ny raharaham-bahiny Afrikana tatsimo teo aloha, izay notohanan'ireo Firenena avy amin'ny vondrona SADC. "Manomboka eto dia trano iray no hisy ny vondrona Afrikana sy ny SADC" hoy ny Filoha RAVALOMANANA raha nampita ity vaovao lehibe ity tamin'ny vahoakan'ny kianjan'ny Finoana ny tenany. Isan'ny nampitarazoka ny fandraisana fanapahan-kevitra manko, raha ho an'ny SADC manokana, ny elanelan'ny fomba fijery eo aminy sy ny vondrona afrikana ary nisy fiantraikany tamin'ny Malagasy izany.
Notsipihiny fa hisy ny fanapahan-kevitra lehibe horaisin'ny SADC sy ny Vondrona Afrikana mikasika ny famahana ny krizy eto Madagasikara ato ho ato. "Tsy maintsy hisy ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara sy eken'ny rehetra hamahana ny krizy" hoy ny Filoha "ka ny vahoaka Malagasy no hifidy izay ankasitrahiny hitondra ny Fireneny". Efa nanamafy sahady ny Filoha RAVALOMANANA fa " vonona amin'izany" ny tenany. Mikasika ny fifampitondrana ara-politika eto an-tanindrazana dia "aoka hatsahatra manomboka eto ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana satria tsy fotoan'izany intsony izao" hoy hatrany ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Namafisiny fanindroany mihitsy ny fahavononany hiatrika izay fifidianana tsy misy fanilihana sy eken'ny be sy ny maro satria efa nilofosany hatrin'ny ela ny fikatsahana ny tontolo mendrika kokoa ho an'ny Malagasy rehetra ary sehatra lehibe afaka hanatanterahana izany ny fifidianana ankatoavin'ny rehetra.